Nzira yekugamuchira Jesu seMuponesi Discover ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Kugamuchira Jesu seMuponesi
Kugamuchira Jesu seMuponesi. Ruzhinji rwevanhu vanoona muna Jesu murume akanaka anokwanisa kutiratidza nzira yekunaka. Nekudaro, pfungwa iyi haitsanangure kuti aive ani chaizvo. Bhaibheri rinotidzidzisa izvozvo Jesu aive mwanakomana waMwari, Mesia, Mwari pachake akaitwa nyama uye akava munhu.
«Pakutanga Shoko rakanga riripo, uye Shoko rakanga riri kuna Mwari, uye Shoko rakanga riri Mwari.
Izvi zvaive pakutanga kuna Mwari.
Zvinhu zvose zvakaitwa naye; kunze kwake hakuna chinhu chakaitwa chakaitwa.
Maari maiva noupenyu, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chavanhu.
Uye chiedza murima chinopenya; asi rima harina kuchinzwisisa.
Akanga ari murume akatumwa achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani.
Akauya seuchapupu, kuitira kuti apupure kuchiedza, kuti vese vatende kubudikidza naye.
Akanga asiri iye chiedza, asi kupa uchapupu kuchiedza.
Icho chaive chiedza chechokwadi, chinovhenekera munhu wese anouya panyika pano.
En nyika aive, nenyika yakaitwa naye; uye nyika haina kumuziva.
Akauya kune zvake, uye vake havana kumugamuchira.
Asi kune vese vakamugamuchira, akapa kodzero yekuva vana vaMwari, kune avo vanotenda muzita rake;
Izvo zvisina kuzvarwa neropa, kana nechido chenyama, kana nechido chemurume, asi naMwari.
Shoko iri rakaitwa nyama, rikagara pakati pedu (uye takaona kubwinya kwake, kubwinya saiye wakaberekwa mumwe woga waBaba), azere nenyasha nechokwadi. ”
Johani 1: 1-14
Chikonzero chaicho nei Jesu vakauya panyika pano yakanga iri ye tifire pamuchinjikwa. Pasina kufa kwake, tingadai tichiri vatadzi uye nekudaro magumo edu angave nekusingaperi kubva kuna Mwari. Ndokureva, kumutevera ndiko kutevera nzira yechokwadi kuruponeso.
Nekudaro, vanhu vazhinji vanoshamisika: Ndingaponeswa sei? Ndingagamuchire sei Jesu seMuponesi? Ndinofanira kuzviitira kupi? Ndingaite riini maitiro aya? Kugadzirisa kusahadzika uku, iwe unofanirwa kuramba uchiverenga.
1 Maitiro ekugamuchira Jesu seMuponesi nhanho nhanho
1.1 1. Tenda kuti Jesu akauya kuzokuponesa
1.2 2. Reurura zvivi zvako pamberi paMwari uye utendeuke zvichibva pamoyo
Maitiro ekugamuchira Jesu seMuponesi nhanho nhanho
Kugamuchira Jesu semuponesi wako, zvese zvaunoda kuti uite tenda kuti Iye inzira kuna Mwari uye ureurure zvitadzo zvemoyo wako. Haisi maitiro, saka haudi chero institution yekuitsigira. Unogona kuzviita chero nguva kubva chero kupi.
"Ukareurura nemuromo wako kuti Jesu ndiIshe uye uchitenda mumoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa"
VaRoma 10: 9
1. Tenda kuti Jesu akauya kuzokuponesa
Tenda kuti Jesu vakauya kuzokuponesa
"Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari, nekuti ani nani anosvika kwaari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaga mubayiro."
Kutenda zvinoreva kubvuma sechokwadi kuti Mwari ariko uye kuti akatuma Jesu kuti akuponese. Bhaibheri rinoti tese tinotadza uye chii chivi anogara achirangwa (ne rufu nekuparadzaniswa naMwari). Hatigone "kuripira" zvivi zvedu nekuita zvinhu zvakanaka. Munhu anogona kugara achiteerera mutemo, asi kana akapara mhosva imwe chete, anofanirwa kushandira mutongo uye achave nerekhodi remhosva kweupenyu hwese.
Mwari haadi kutiparadzanisa nesu. Naizvozvo Jesu akauya kuzogamuchira kurangwa kwezvivi zvedu zvose. Aya ndiwo maitiro atinogona kudzima edu "matsotsi marekodhi" uye kudzokera kuhukama hwehukama naMwari, zvachose. Ingobvuma kuti Jesu akabhadhara mutengo wezvivi zvako uye edza nepaunogona napo kuti uswedere padyo naMwari.
2. Reurura zvivi zvako pamberi paMwari uye utendeuke zvichibva pamoyo
Reurura zvivi zvako pamberi paMwari
Kureurura zvinoreva mushoko nemumoyo kuti unoramba chitadzo uye kuti Jesu ndiye ishe wehupenyu hwako. Ichi chiito chakakosha nekuti chinosimbisa kuti unotenda zvechokwadi kunaIshe wedu uye kuti unoda kuenda kwaari.
"Kana munhu akapupura pachena kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari, Mwari unogara maari, naiye muna Mwari"
1 Johani 4: 5
"Kana tichireurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama, uye anotikanganwira zvivi zvedu agotinatsa pakusarurama kwose."
1 Johani 1: 9
Iwe waverenga Maitiro ekugamuchira Jesu seMuponesi
Tinovimba kuti chinyorwa chipfupi ichi chapindura mibvunzo yako. Saka zvino? Unoda kuziva sei Mwari akasiya Jesu pamuchinjikwa? Kana iwe uchiri kuzvibvunza iwe iwo mubvunzo, ramba uchivhura Ziva.online.
Jesu akadana sei vadzidzi vake